Mogadishu Journal » Isku aadka Koobka Adduunka: Isku aadka Group kasta ee Qatar 2022
Isku aadka Koobka Adduunka 2022 ee ka dhacaya dalka Qatar ayaa dhacay Jimcihii, waxaana jira kulamo is daba joog ah oo la sugi doono ka hor inta aysan bilaabmin wareegyada bug-baxa.
Spain iyo Germany, oo ah laba ka mid ah saddexdii xul ee ugu dambeeyay ee ku guulaysta tartanka, ayaa ku wada jira isku group, halka Qatar oo martigelinaysa ay hadda og tahay inay ciyaarta la ciyaari doonto Ecuador 21ka November.
Saddex kooxood ayaa wali la go'aamin doonaa, iyadoo laba ciyaarood oo isreebreebka Confederation-ka ah iyo ciyaar-is-reeb-reeb ah la qaban doono bisha June - taas oo macnaheedu yahay in ay tahay arrin dhammaan Ingiriiska ah oo England ah, kuwaas oo furi doona ololahooda ka dhanka ah Maraykanka.
France oo koobka heysata ayaa wajihi doonta Denmark, Tunisia iyo mid ka mid ah Peru, Imaaraadka Carabta ama Australia. Brazil waa inay kalsooni ku qabtaa inay ka soo baxdo Group G, halka Belgium, Portugal iyo Argentina, si la mid ah, ay leeyihiin tayo ay kaga soo bixi karaan.
Hoos waxaa ku yaal isku aadka heerka group-yada oo dhameystiran, iyadoo waqtiyada furitaanka iyo goobaha lagu ciyaari doono kulan walba aan wali la xaqiijin.
Qatar Ecuador Senegal
England Iran United States Wales ama Scotland/Ukraine
Argentina Saudi Arabia Mexico Poland
France Peru ama Imaaraadka Carabta/Australia Denmark Tunisia
Spain Costa Rica ama New Zealand Germany Japan
Belgium Canada Morocco Croatia
Brazil Serbia Switzerland Switzerland Cameroon
Portugal Ghana Uruguay South Korea
Todobo Musharax oo isku diiwaangeliyay doorashada 2 kursi oo beri la dooranayo (Sawirro)
Midowga Musharaxiinta oo War kasoo saaray Go’aanii Rooble dalka uga eryay Madeira